Agreement between Neeleyn university: suudaan and nugaal university | Nugaal University
Jaamacadda Nugaal oo heshiis iskaashi waxbarasho la saxeexatay jaamacadda Afrika ee caalamiga ah ee dalka Suudaan
Wafdi ka socda Jaamacadda Nugaal ee laascaanood oo ka kooban guddoomiyaha jaamacadda ustaad Cabdirisaaq Maxamed Aadam iyo hormuudka kulliyaadda shareecada Dr. Axmed Jaamac ismaaciil ayaa ayaamahanba safar shaqo ku joogay dalka Soodaan, safarkaas oo ujeedkiisu ahaa in la xoojiyo xiriirka wasaaradda waxbarashada sare iyo cilmibaarista ee Soodaan iyo jaamacadaha dalkaas.
hadaba maanta oo taariikhdu tahay 22\_1\_2018 waxaa jaamacadda Nugaal heshiis iskaashi waxbarasho la saxeexatay jaamacadda Afrika ee caalamiga ah ee dalka Soodaan, heshiiskaas oo dhigayey arrimahan hoos ku cad:
1- Xoojinta iskaashiga aqooneed iyo cilmi-baariseed ee labada jaamacdood.
2- Is-weydaarsiga booqashada macallimiinta iyo cilmibaarayaasha.
3- Iskaashiga kobcinta tayada macallimiinta ee labada jaamacadood.
4- Isbooqashada aradayda kuliyadaha iyo post-gratuate-ka.
5- Wada-qabashada kulamada iyo shirarka aqooneed iyo kuwa cilmibaariseed.
6- Iskaashiga horumarinta qorshayaasha iyo barnaamijyada akaadeemiga ah iyo kuwa manhajka.
7- In labada jaamacdood iska kaashadaan wada qabashada todobaadyada hiddaha iyo dhaqanka, ciyaaraha iwm.
8- Kala faa,iidaysiga khibradaha aqooneed iyo akaadeemi ee labada jaamacadood.
9- Kobcinta garaadka ardayda fahamka sare leh ee labada dhinac.
10- Ka wada faa,iidaysiga tecknology-ga labada website ee labada jaamacdood.
Heshiiskaas waxa dhinaca jaamacadda Nugaal u saxeexay guddoomiyaha jaaamacadda ustaad Cabdirasaaq Maxamed Aadan(lafoole), dhinaca jaamacadda Afrika ee soodaanna guddoomiye ku xigeenka jaamacaddaas ee arrimaha waxbarashada iyo hiddaha iyo dhaqanka Muuse Daaha Tay Allah.
jaamacdda Nugaal waxay xiriir la leedahay jaamacadaha dalka, kuwa gobolka afrikada bari iyo kuwo caalami ahba, waxaana ka go,an horumarinta heerka aqooneed ee ardayda iyo balaadhinta xiriirka jaamacadda.
Wafdiga jaamacadda nugaal oo wali ku sugan magaalada Kharduum ee caasimadda dalka Suudaan, wuxuu maalmaha soo fool leh heshiisyo la saxeexan doonaa jaamacado kale oo caan ka ah dalkaas iyo hayadaha deeqaha waxbarasho u fidiya ardayda ee fadhigoodu yahay dalka Suudaan.
Sidoo kale wuxuu wafdiga jaamacadda Nugaal la ballansan yahay wasaaradda tacliinta sare iyo cilmibaarista ee dalka suudaan si looga wada hadlo iskaashiga tacliinta sare.